Azure Sphere, Microsoft's Linux system yeIOT yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Anenge makore maviri apfuura, mwedzi makumi maviri nemaviri yekuve yakanyatsoita, Microsoft akapa zvirongwa zvake kuvhura Linux-based operating system. Asi kwete, kwaisave kugovera kwemakomputa senge Ubuntu, Debian kana Fedora, asi hurongwa hwaizoshandiswa muInternet yezvinhu (IoT). Nechekare muna Kukadzi 2020, maawa mashoma apfuura, iyo kambani inotungamirwa naSatya Nadella yave nemufaro wayo zivisa kuwanikwa kwakawanda uye kwepasirese kwe Azure Sphere.
Chinangwa cheAzure Sphere ndechekugadzira nharaunda yakachengeteka chose kukudziridza nekushandisa zvishandiso kubva ku internet yezvinhu, ndiko kuti, iwo akangwara uye emazuva ese zvishandiso zvakabatana neinternet, asi izvo zvatisingabatana zvakanyanya sezvatinoita ne smartphone kana komputa. Azure Sphere inosanganisira hardware, software, uye zvikamu zvebasa, izvo zvinogona kuve zvine chekuita nenguva yakatora kutanga Iyo inoshanda sisitimu kubvira payakapihwa.
Izvo Azure Sphere inotipa
Certified chips machipisi, yakavakwa nevashandisi vemahara
Microsoft pachayo tsika yeLinux inoshanda sisitimu iyoyo, inonzi Azure Sphere OS.
Iyo Project Security Service, sevhisi inomhanya kubva kuMicrosoft data data iyo inounganidza dhata pane yekuchengetedza mamiriro eIoT zvishandiso uye inopa otomatiki inogadziridza yeavo madhivha.
Iyo Service Security Team kuMicrosoft, iyo inobatsira kuziva uye kugadzirisa IoT chishandiso chengetedzo
Parizvino uye kubvira nezuro, Kukadzi 24, iyo inoshanda chete inosanganisira rutsigiro rweiyo MediaTek MT3620 chip. Vamwe vatengesi vehardware vari kushanda kutsigira Azure Sphere, seNXP iyo Microsoft yakabatana nezhizha rapfuura. Iyo kambani inotungamirwa naSatya Nadella inotarisira kusaina zvibvumirano zvitsva uye kuti vamwe vagadziri vachabatana neprojekti yayo mune yepakati-tema ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Azure Sphere, Microsoft inoshanda sisitimu yeIoT iyo yakavakirwa paLinux yave kuwanikwa